China Pipe Repair Clamp Stainless Steel Multi-Function Tee Products Repair Leakage Manufacture and Factory |CHUANGRONG
1. Zita: Multi-fuction Tee
2. Inogona kugadzirisa matambudziko akasiyana ekubatanidza nekugadzirisa.
Gadzirisa Leak Pipes
Stamping uye Welding
1,Iyo huru bhendi mhando yegadziriso yekusungirira inokandwa simbi pombi, simbi, simende chubhu, Pe, PVC, girazi simbi chubhu uye zvichingodaro pane akawanda marudzi epipeline kuputika, kuboora, uye marudzi ese ekukuvadzwa kwemutswe inopa nzira yekukurumidza uye yehupfumi yekugadzirisa. inogona kuderedza zvakanyanya mari yekushandisa uye yevashandi.
2,Ichi chigadzirwa chekuisa chiri nyore, nekukurumidza, chinoda munhu mumwe chete, chipanera chinogona kupedzisa kugadzirisa pombi nyore, hachichada nhamba huru yevashandi, haigone kumira zvachose, kwete kutsiva pombi yekumanikidza kwepombi yekukurumidza kugadzirisa, iyo denderedzwa arc. zvedhigirii zvinodiwa pombi yakaderera.
3, Iyo simbi isina tsvina, ine anticorrosive, yakakwirira kuoma, kuoma uye humwe hunhu.
4, bhendi remhando yegadziriso yekusungirira ine mhete yekuvharisa kaviri, aft kuita tapered, chero iri mukati mechikamu chehukuru hwemaoko hoop, apo vese vanogona kuona kupindirana kunoshanda, chisimbiso chakafanana. Kuvhara mhete sruface yemambure akanaka, inogona kuchinjika kune yakaoma , iyo isina kujairika pamusoro porous mapaipi, yakatenderedza iyo yese pipeling sealing denderedzwa fomu inoshanda.
5, Ichi chigadzirwa chinoshandisa kadhi buckle mhando yekubatanidza modhi, uye chigadzirwa chiyero chikuru chakakodzera dhayamita inogona kusvika 30 mm, inogona kuderedza zvakanyanya hesera, iyo chigadzirwa chemhando inogona kubva kuDN1500-kugadzirisa upamhi inogona kusvika 2000mm, ingangosangana. saizi yepombi.
nokuda kwesimbi isina tsvina yekugadzirisa clamp
1), bamba muviri: Stainless simbi SS 304 .
2), mabhaudhi uye nzungu: simbi isina SS 304.
3), rabha: NBR/EPDM .
4), Kukiya washer palte, Lugs, Receiver mbariro, Armour: Stainless simbi 304
6).kurongedza : makesi emapuranga
yeDI kugadzirisa clamp
1), kusungirira zvikamu castings: Ductile iron GGG500-7 ine fusion yakasungirirwa epoxy coating
2), mabhaudhi uye nzungu: Carbon simbi, Giredhi 4.8, zingi rakapfava.
3), rabha : EDPM .
4), simbi muviri: Stainless simbi SS304.
1) Machira akagadzirirwa kushandiswa pamhepo, mvura uye gasi mapaipi.
2) Zvisungo zvakatsaurirwa chigadzirwa chinokodzera chete SABS 62 simbi mapaipi, metric uye imperial PVC mapaipi.
1) Shell-Stainless Simbi 316
2) Bolts-Simbi kuBS970 Giredhi 070M20
3) Bolt coating-zinc plated
4) Rubber Seal-EPDM kuSABS 974
Chikamu / Zvinhu M1 M2
Ganda 304 / 304L 316 / 316L
Bridge Plate 304 / 304L 316 / 316L
Kukiya Plate 304 / 304L 316 / 316L
- Tarisa kune AS 4181-2013,DIN86128-1/2, CB/T4176-2013
PIPE KUGADZIRIRA CLAMP
Simbisa pombi OD uye nzvimbo inovuza yaunoda kugadzirisa.Sarudza iyo chaiyo clamp mhando (imwe kana mbiri bhendi, hupamhi kana kureba nezvimwewo).Sarudza saizi yakakodzera ndeyepombi OD yauri kuzogadzirisa.Eg Kana pombi OD iri ≤300mm, chinosungirira chaunosarudza chinofanira kunge chiri pa80mm kupamhama kubva panobvinza.Kana pombi OD≥300mm, kureba kwacho kunofanira kunge kuri 100mm musango kuvharisa panobvinza.
Kamwe kukurumidza kugadzirisa kunoda kuitwa pamapombi elagrg, unganidza madiki madiki ekusungirira kune imwe akati wandei kugadzirisa bhendi.
1.Iva nechokwadi chepombi chaiyo OD, iyo yaida kugadziriswa.
2.Sarudza maviri kana matatu madiki madiki mabhanhire, ita shuwa kuti huwandu hwehuwandu hwazvo hwakaenzana neO.Dof pombi yaunoda kugadzirisa.Eg pakudzokorodza pombi yeDN500mm DI, O.D510mm, sarudza mabhanhire matatu eDN150 ari 159-170 kuti aite saizi chaiyo yeDN500 iyi.
3.Zvisungo zviduku zvaunoshandisa kuungana kune imwe huru hazvidiwi kuti zvive zvakaenzana, asi zvingava zviri nani kune zvakafanana.
1.Get well-reading before installing.Tarisa zvikamu kuti uone kuti hapana kukuvara kwakaitika panguva yekufambisa uye kuti hapana mapaki asipo.Tarisa dhimita yepombi uye clamp yakatarwa (pa label) kuti uve nechokwadi chekuti une chibatiso chakakodzera chekushandisa kwako.
2.Clean uye kubvisa chero zvisizvo pamagumo epombi.
3.Pakupedzisira pombi imwe neimwe, ita chiratidzo chiri chinhambwe chakaenzana nehafu yehupamhi hwekubatanidza.
4.Pasina kuzarura kubatanidzwa, slide coupling pamusoro pepombi yekupedzisira.
5.Kuunza imwe pombi inopera yakatarisana popsition.Ita shuwa kuti mapaipi anoenderana nepakati uye kuti ese mapipe epombi anotsigirwa curreclty.Ona kushivirira kunoratidzwa pane iyo label.
6.Isai kubatanidzwa pakati pezvikwangwani uye iva nechokwadi chokuti nhumbi dzokurwa dziri pasi pemabhoti.Usapfuure izvo torque zvinodiwa zvinoratidzwa pane chigadzirwa label.
7.Simbisa mabhoti alternately uye akaenzana kune torque inodiwa.Kana paine mabhaudhi matatu, tanga nepakati bhaudhi, wotanga kuomesa.Usatenderedza coupling kana pombi panguva kana kupedzisa kusimbisa.
Crude Oil pipline, Gasi/Natural gasi/pombi yemafuta, Supply/Draign water pipeline, Aviation/Motary special pipeline, Lubricating Mafuta pombi, Mud slag pipline, Suction pombi, Flushing power pombi, Cable protection pipeline, Gungwa/Fresh water pipeline, Turbine pombi, Air conditioning pombi, Moto pombi, Ventilation pombi, Compressed mweya pombi, uye nezvimwe.
Kana Iwe Uchifarira Zvigadzirwa Zvedu, Ndokumbira Utibate, Ndatenda
Zvakapfuura: R-SB40 Hombe Tsvimbo Extruder Mubato Shandisa Plastic Extrusion Welding Pfuti
Zvinotevera: Plastic Hand Extrusion Welding Pfuti YePurasitiki Pipe Plastic Sheet WELDY Machines Booster EX2
Simbi isina tsvina Ductile Iron Band Pipe Repair C...
Kuvhura Type Pipe Repair Clamp RCE Stainless St...
Mini-Type Pipe Repair Clamp Kurumidza Kugadzirisa Leakag...
Gear-Ring Type Multi-Function Pipe Coupling GR ...
Stainless Steel Band Pipe Repair Clamp CR Yakashandiswa ...
Kaviri-Chikamu Pipe Kugadzirisa Kubatanidza RCD Yakashandiswa Pa...